IOS9को लूपिंग रिबूटलाई कसरी रोक्न सकिन्छ जेलभ्रेकको साथ आईफोन समाचार
जेलब्रेकको साथ कसरी आईओएस lo लूप रिबुटबाट बच्ने
मिगुएल हर्नान्डेज | | आईफोन समाचार, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
समस्याहरू जेलब्रेकको प्राय संस्करणहरूमा अन्तर्निहित छन्, हामी यसलाई लुकाउने छैनौं। अवश्य नै यो जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू सामान्य भन्दा बढी सामान्य छन्। यस पटक हाम्रो मतलब नुन «डेडथको बुट लूपB उत्तम BLoD भनेर चिनिन्छ, जुन आईओएस and र यसको जेलब्रेकमा देखा पर्दछ, यो बगले धेरै आईओएस प्रयोगकर्ताहरू र उनीहरूको भर्खरको जेलब्रेकलाई उल्टो पार्दैछ, यो बग यस्तो अवस्था हो जुन उपकरण लगातार पुनः सुरु हुने बित्तिकै, न-स्टप, नभएसम्म देखा पर्दछ। ब्याट्री अप समाप्त हुन्छ र यस्तै अन्य तपाईंसँग ब्याट्री हुँदा, पुन: भण्डारण बाहेक अरु कुनै समाधान हुँदैन। तर वास्तवमा आईफोनमा हामी यो असहमतिलाई अस्थायी रूपमा समाधान गर्नको लागि हामी एउटा ट्यूटोरियल ल्याउँदछौं।
स्पष्ट रूपमा समाधान पुनर्स्थापना हो, तर हामीसँग अन्य विकल्प छैन। आईफोन पूर्णतया मरेको छ जब यो राज्यमा प्रवेश गर्छ, त्यसैले हामीसँग अन्य विकल्प छैन, हामी ब्याकअप मार्फत डेटा बचत गर्नेछौं, जुन थोरै छैन। यी चरणहरू हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ।
जेलब्रेक आईओएस of को लूप रिबुट (BLoD) बाट कसरी निस्कने
सबैभन्दा पहिले, हामीले पहिले नै भनेजस्तै, हामी प्रदर्शन गर्न जाँदैछौं एक एनक्रिप्टेड बैकअप हाम्रो उपकरणको, डाटा बचत गर्न सक्षम हुन। यो गर्नका लागि, हामी उपकरणलाई हाम्रो पीसी वा म्याकमा आईट्यून्स खोल्छौं र सामान्य चरणहरू अनुसरण गर्दछौं।
हामी फोन राख्छौं DFU मोडमा: यो गर्नका लागि हामी उपकरणलाई कम्प्युटरमा आईट्यून्स खुलासँग जडान गर्नेछौं, त्यसपछि हामी दश सेकेन्डको लागि होम + पावर बटन थिच्नेछौं, त्यस दश सेकेन्ड पछि हामी पावर बटन रिलीज गर्छौं तर आईट्यून्स आइकन स्क्रिनमा देखा पर्दासम्म सुरु बटन राख्दछौं। र कम्प्युटरले उपकरण पत्ता लगाउँदछ।
आईओएस .9.0.2 .०.२ मा पुन: भण्डारण गर्न, उपकरण पुनः भण्डारणमा क्लिक गर्नुहोस्
एक पटक पुनर्स्थापना समाप्त भएपछि हामी यसलाई «को रूपमा कन्फिगर गर्नेछौं।नयाँ उपकरण।, यो सहि हो, अति महत्त्वपूर्ण चरण, हामी आईक्लाउड सेटिंग्स वा टचआईडी समावेश गर्दैनौं।
हामी विन्डोज संस्करण १.०.१ को लागि पानगु डाउनलोड गर्छौं
हामी जयब्रेक गर्छौं।
हामी फोनबाट साइडिया शुरू गर्नेछौं हवाइजहाज मोडमा तर वाई-फाई सक्रियको साथ.
हामी बिगबोस रिपोजिटरीबाट साइडिया सब्स्ट्रेट स्थापना गर्दछौं र सामान्य श्वसनको लागि पर्खन्छौं।
जब यो सकियो, हामी उपकरणलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर फेरि खोल्छौं।
अब हामी होम + पावर बटनको साथ लामो समयको लागि रिबुट गर्नेछौं।
पत्रमा यी चरणहरू सहित, लूप पुन: सुरूको समस्या हराउनेछ, अब जब हामी आईक्लाउड मार्फत हाम्रो डाटा प्रविष्ट गरेर ब्याकअप पुनःस्थापनाको प्रक्रिया गर्न सक्छौं। पang्गुको नयाँ संस्करण जारी भएको बेलामा, यदि हामी समस्याबाट बच्न चाहन्छौं भने यो एक मात्र र थकाउने विकल्प हो। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंको सेवा गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » जेलब्रेकको साथ कसरी आईओएस lo लूप रिबुटबाट बच्ने
अल्फोन्सो आर। भन्यो
तर तपाईंले यो कहाँ पढ्नुभयो? मेरो मतलब त्रुटि हो। किनभने उदाहरणको लागि GSMSpain कसैले पनि यो समस्या रिपोर्ट गरेको छैन।
Alfonso आर लाई जवाफ दिनुहोस्।
मोमोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई भयो
Saitam लाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई पनि भएको छ। के अधिक छ, म iCloud वा iTunes बाट ब्याकअप पुनर्स्थापना गर्न सक्दिन। यसले मलाई बताउँछ कि ब्याकअप संस्करण बिग्रेको छ वा समर्थित छैन।
कसैलाई थाहा छ यसलाई कसरी तय गर्ने?
नमस्कार मलाई पनि त्यस्तै भयो, तर सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान भनेको यो हो कि पहिले मोबाइल बन्द गरिएको छ र त्यसपछि तपाई बटन थिच्नुहोस् भोल्युम बढाउनको लागि…। र पदार्थ स्थिर
त्यसोभए जेलका डिफेन्डरहरू भन्छन् कि आईओएस यत्तिकै स्थिर छ कि यो ब्रेक गर्दैछ हाहाह म भाँच्दछु। त्यहाँ क्यारेक्टरहरू छन् र अनिश्चितको रक्षा गर्न मन पराउँछन्! कि तपाइँ अधिक chorraditas राख्न सक्नुहुन्छ, हो ... तर त्यहाँ बाट यो स्थिर छ र यसले तपाईलाई समस्याहरू प्रदान गर्दैन त्यहाँ विश्व छ !!
पूर्ण रूपमा स्थिर जबसम्म तपाइँ इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्नुहुन्छ !!! यदि तपाईं गम्भीर रिपोजिटरीहरू स्थापना गर्नुहुन्छ र टिमको साथ पागल हुनुभएन जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो रुचिमा पूर्ण रूपमा स्थिर र निजीकृत यन्त्रको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
पिलिनोभोलाई जवाफ दिनुहोस्
पहिले नै ... स्थिर जस्तै ... प्रतीक्षा म तल भाँचिरहेको छु र म hahahahahahahaha लेख्न सक्दिन ... अत्याचारी भन्न छैन !!!
अरूलाई झुक्याउन कमबख्त नहुनुहोस्, यदि तपाईंलाई जेलब्रेक मनपर्दैन भने तपाईं यहाँ सोच्नुहुन्छ कि एप्पल फोरममा जानुहोस् र यहाँ कमबख्त रोक्नुहोस्।
पहिलो समाधान भनेको सुरक्षित मोडमा आईफोन सुरू गर्नु हो, आईफोन / आईप्याड बन्द नभएसम्म यो पावर + होम थिचेको छ र खोल्दा यी बटनहरू छोड्नुहोस् र भोल्युम + थिच्नुहोस् जबसम्म आईफोन सुरु हुँदैन, यस मोडमा यसले घटाउ काम गर्दैन। Cydia मा जानुहोस् र समस्या को कारण चिमटा हटाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि खोल्नको लागि उपकरण बन्द गर्नुहोस्, र आशा निश्चित छ। यदि यसले कार्य गर्दैन भने, त्यसोभए यो पुनः भण्डार गर्ने समय हो, तर पहिले यसलाई पूर्वावस्थामा बिना सुधार गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। आज एक्टिभेटर स्थापना गरिसकेपछि, मेरो आईफोन रिबूटहरूको अनन्त लुपमा थियो र म यसलाई सुरक्षित मोड सुरू गरेर र अस्थापनाकर्ता स्थापना हटाएर यसलाई समाधान गर्न सक्षम भयो।
लियोनार्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
PS एक्टिभेटर उत्तम तरिकाले काम गर्दछ र भर्चुअल होम जस्तै म कसरी यो बाँच्न सक्दछु दुई बिना अपरिहार्य ट्वीक आईफोन plus प्लस .6 .०.२ अहिलेसम्म समस्याहरू बिना र आईफोनको टिप्पणीमा लामो समयसम्म स्थिर हुन सक्छ जबसम्म तपाईंलाई थाहा छ स्थापना गर्न के हो र के होइन ¬¬
IMU लाई जवाफ दिनुहोस्
लूपले मलाई हुने गर्छ जब मैले अघिल्लो ब्याकअप (iOS 8.4 जेलब्रेकको साथ) आईट्यून्स मार्फत मैले गरेको पुनःस्थापनाको लागि गरें।
मैले दुई तरिकाहरू अपनाएको छु:
आईओएस .9.0.2 .०.२ सफा पुनर्स्थापना - जेलब्रेक - साइडिया सब अपडेट - आईट्यून्स मार्फत ब्याकअप - लगातार रिबूट
आईओएस .9.0.2 .०.२ सफा पुनर्स्थापना - आईट्यून्स मार्फत ब्याकअप - निरन्तर रिबुट (जेलमा जान सक्दैन)
यहाँबाट मात्र म स्पष्ट पार्न सक्छु कि आईट्यून्स मार्फत मेरो ब्याकअप क्र्यास हुन्छ जुन कुनै चीजको कारण आईओएस with को साथ उपयुक्त छैन। मलाई लाग्छ कि अघिल्लो आईओएस जेलब्रेकबाट डाटा छ जुन ब्याकअप प्रतिलिपिमा बचत गरिएको छ र यसलाई पुन: स्थापना गर्दा मेरो प्रणाली क्र्यास हुन्छ।
कुनै पनि राय वा मद्दत आईओएस .8.4..XNUMX को अघिल्लो ब्याकअप स्थापना गर्न सक्षम हुन? अहिलेको लागि, आईक्लाउड मार्फत प्रतिलिपिहरूले मलाई प्राय सबै आधारभूत जानकारीको लागि अनुमति दिएको छ तर आईट्यून्ससँग मसँग अधिक छ।
Niniking लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मित्रहरू, मसँग आईप्याड २ छ र मसँग यो एउटा लूपमा छ, म यसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न सक्दिन, यो मलाई कहिले भएको थिएन र धेरै एप्पल उपकरणहरू मेरो हातहरूबाट पारित भएका छन्, तर जीवनमा यो त्रुटि जस्तो। मैले यो मर्मतका लागि chipspain.com लाई पठाएँ र उनीहरूले केहि गर्न सक्दैनन्। कसैलाई कुनै समाधान थाहा छ ???
JbNoXs लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो लुप गर्दैछ भने, तपाइँले यसलाई DFU मा हाल्नु पर्छ र फेरि पूर्वावस्थामा ल्याउनु पर्छ।
Mateo लाई जवाफ दिनुहोस्
जीन माइकल रड्रिग्ज भन्यो
धन्यवाद मित्र, यससँग मैले समस्या समाधान गरें।
यो हुन्छ कि हिजो मैले साइडियामा प्रवेश गरें र त्यहाँ महत्वपूर्ण अपडेटहरू थिए (साइडिया इन्स्टल, सब्सट्रेट, आदि) र जब मैले स्थापना पूरा गरें मैले ss पुन: सुरु गरें र यो भयो कि म लूपमा छोडियो। आईओएस .5 .१ मा पुन: स्थापना गर्नुहोस् यसले कसरी कार्य गर्दछ भनेर। आज मैले .9.1 .०.२ मा फिर्ता जाने निर्णय गरे र मैले सामान्य गरेँ भनेर पत्ता लाग्यो, मैले आईफोन पुनर्स्थापना गरें, मैले ब्याकअप पुनर्स्थापना गरें, मैले जेलब्रेक गरें र थाहा भयो कि यो लूपमा फर्कियो। मैले यी चरणहरू अनुसरण गरेको थिएँ र मैले फोन २ चोटी पुनःस्टार्ट गरिसकेको छु (XD फ्लास भएको खण्डमा) र यो लामो समयसम्म रहदैन। धन्यवाद मित्र
जीन माइकल रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
स्प्रिंगटमाइज compatible आईओएस with को साथ उपयुक्त हुने
एक्टिभेटर अपडेट गरीयो र अब आईओएस with को साथ उपयुक्त छ